Algaefarm kurwisa nzara muAfrica
24 Dai 2017
24. May 2017 Oliver Bienkowski
KUKUNDA KUDZIDZA RADICAL ISLAM
Campaign inopikisa Radical Islam
Tinokumbira kuti kurambidza enyika Islam communitys Kunokonzerwa vasori nemitemo German uye vakakanganisa nomunondo muruoko rwake nokuda hondo vanoparidza #Kurdistan. Light Art #Karikaturen kuna DITIB huru chechi - Cologne #Moschee The huru huru kupfuura Mosque kushamwaridzana muna #Deutschland, #DITIB kwakabatana kune Turkish vezvitendero Bureau #Diyanet. Mutungamiri weNhepfenyuro Yezvechitendero unoda "nhoroondo dzakadzama" pamabasa ako eImane evanhu vemunharaunda. Nyika yeTurkey Inoshandisa spy pasi pechikonzero chekusununguka kwechitendero.
1. NY: Anotarisira nzvimbo A. uye achishingaira kushanda kwechimiro ichi. Saka anotevera #Putschversuch July 15, Anoramba achiomerera panzvimbo yayo. (...) 3. RA: Dzokera kuhondo yekuedza kubva kubhodi yemusangano wemasikiti. Uyu muzukuru wezvinyorwa wevakatsvaga pakusungwa kwemhosva AA, aimbova munyori we #Newspaper #Zaman. Inotora chikamu mu "# collection collections" "chigadzirwa ichi" # rakagadzirirwa. (...) 7. T. e. Munguva dzekudzidza, akagara mu #Hausheimen iyi sarudzo uye akauya ku #Germany se #Braut. Kunyange Kana Ivo Vasingabatanidzwi Muzviitiko zveSynthesis #Structure, vanofanira kunge vakanamatira kune chimiro ichi.
Mushumo rinoguma nemashoko: ". Mazita aya ave kushumwa achangofa akaedza kubvuta masimba July 15, vamwe vanocherechedza vemunharaunda kuti akwanise ehurumende miviri uye Turkish mishoni kunze"
KUKUNDA KUDZIDZA RADICAL ISLAM February 19th, 2018Oliver Bienkowski